Guddiga doorashada BF oo soo saaray 14 qodob oo la xiriira maalinka doorashada - Caasimada Online
Home Warar Guddiga doorashada BF oo soo saaray 14 qodob oo la xiriira maalinka...
Guddiga doorashada BF oo soo saaray 14 qodob oo la xiriira maalinka doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan cidda loo xil-saaray mas’uuliyadda ammaanka goobta doorashada iyo doorka ay ku yeela karaan ciidamada qaranka
Qodobka koowaad ee warqadda guddiga ayaa lagu cadeeyey in taliska booliska Soomaaliya uu yahay hoggaamiyaha guud ee amniga doorashada, halka amniga irdaha laga galo teendhada Afisyooni iyo gudaha xarunta ay masuul ka yihiin ciidanka ATMIS.
Nabad Sugidda iyo Militeriga ayaa loo sheegay inay adkeeyaan oo masuul ay ka yihiin amniga gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho oo doorashadu ay ka dhaceyso, waxaana si gaar ah Nabad sugidda loo faray inay fashiliyaan hadii ay jiraan dhagaro loo maleegay doorashada.
24 askar oo ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaas oo aan hubeysneyn ayaa gudaha hoolka doorashada kala shaqeyn doona ciidanka ATMIS, sida lagu cadeeyey bayaanka guddiga.
Sidoo kale ciidanka militeri ah oo qayb ka degan Teendhada Afasiyooni ayaa si ku meelgaar ah looga rarayaa xarunta teendhada, inta doorashada lagu guda jiro.
Hoos ka akhriso bayaanka oo dhameystiran:
Tariikh 10/05/2022 Guddoonka Baarlamaanku waxuu soo saarey bayaankan Amni ee Tafaasiishu hoos ku qoran:
E) Ciidanka Booliska iyo kan Nabadsugida waxay ka masu’ul yihiin fududeynta socodka Murshaxiinta, Xildhibaanada iyo martida madaxda ah ee la martiqaaday ay ku soo gaarayaan Teendhada ilaa inta lagu guddo juro Doorashada.
F) Afar iyo labaatan (24) Booliis ah oo aan hubaysnayn waxay kala shaqeynayaan ATMIS warunta doorashadda ee Teendhada Afasiyooni.
H) Ciidanka Xoogga Dalka qaybta degan Teendhada Afasiyooni waxay si ku meelgaar ah u banaynayaan Xaruunta teendhada inta Doorashada lagu guda jiro, waxayna xoojinayaaan Amaanka banaanka.
I) Ayadoo la raacayo sida ku cad habraacyada Guddiga qaban qaabada Doorashada Madaxwaynaha ay soo saareen, Murashaxiinta u tartamaya Xafiska Madaxweynaha waxay ka soo galayaan albaabada tilmaaman, halkaas oo ay ATMIS ka qaadi doonto ayna sii galbinayaan ilaa Teendhada.
K) Maalinta Doorashada Madaxweynaha lama ogola in lala soo galo Teendhada Telephone ama Tablet. Ka soo qaybgalayaasha waxaan kula talinaynaa in ay Telephoonadooda uga soo tagaan banaanka oo ay darwaladoodu u dhiibtaan.
L) Murashaxiinta u taagan Xafiiska Madaxweynaha maalinta Doorashada waxaa loo ogolyahay min hal caawiye. Madaxwynaha hada jooga waxaa loo ogol yahay Saddex caawiye. Madaxweynayaashii hore waxaa loo ogolyahay laba caawiye kiiba.
M) Dhamaan Murashaxiinta, Xildhibaanada iyo martida la martiqaaday baaburtooda waxay uga soo tagayaan Dugsiga Tababarka Ganaraal kaahiye ama Barxada Airportka. Intaa ka dib waxaa la marayaa baaritaanka amniga ee albaabka Airportka, dabadeedna waxaa la raacayaa Basaska Booliiska iyo UN oo geynaya Teendhada.
N) Murashaxa ku guuleysta/guulaysata Xafiiska Madaxweynaha waxaa isla markiiba amnigiisa/ amnigeeda la wareegaya ATMIS, waxaana loo qaadayaa meel amnigeedu suganyahay.